कम्युनिस्ट एकता किन ?
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले थुप्रै आरोह–अवरोह खेप्दै आएकोछ । विचलन, फुट र विग्रहले सिङ्गो आन्दोलन सङ्क्रमित देखिन्छ । नेपालमा कतिपय कम्युनिस्टबीच कार्यनीति र रणनीतिमा मतान्तर रहेको छ भने कतिपय कम्युनिस्टबीचमा रणनीति मिले पनि, कार्यनीतिक मतभेद रहेको छ । यसबाट कम्युनिस्ट पार्टीबीच सही ढङ्गले अन्तरसङ्घर्ष वा दुइलाइन सङ्घर्ष सञ्चालन नभएको प्रस्ट हुन्छ ।
स्टालीनपछि ख्रुश्चेभले संशोधनवादी कार्यदिशा लागू गरे । यसैबीच चीन–सोभियत सङ्घ कम्युनिस्ट कार्यदिशाबारे विवाद सिर्जना भयो । यता माओपछि देङले चीनमा सुधारवादी नीति लिए । पूर्वी युरोपको समाजवादी सत्ता भकाभक ढले । त्यसपछि विश्वमा समाजवादी सत्ता धराशयी बन्यो । विश्वभरि नै कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक भयो । यही वस्तुगत धरातलमा नेपालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी कार्यदिशाको सवालमा रुम्मलिन पुग्यो । कसैले क्रान्तिकारी, कसैले मध्यपन्थी अवसरवाद र कसैले दक्षिणपन्थी सुधारवादी लाइन समाते । रणनीतिक लक्ष्य एउटै हुँदाहुँदै पनि कार्यनीति सवालमा चरम मतभिन्नता भए । यसले नेपालजस्तो वर्ग अन्तरविरोध र उत्पीडन भएको समाजमा पनि अपेक्षित रूपमा कम्युनिस्टले नेतृत्व गर्न सकेन । यद्यपि, नेपाली समाजको वर्गचरित्र कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि उर्वर भूमि रहेकोमा दुईमत छैन ।
पछिल्लो समय नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल हुँदै एकताको पहल भइरहेको छ । यो नितान्त ऐतिहासिक र नयाँ विषय बनेको छ । त्यसैले वाम एकताको प्रसङ्गमा आवश्यकताभन्दा बढी तरङ्गित र निराश हुनु वस्तुसङ्गत ठम्याई हुँदैन । यसमा औधी हौसिनु, मात्तिनु र आत्तिनुभन्दा यसभित्र अन्तरनिहित राजनीतिक तथा प्राविधिक आयामको गम्भीर विश्लेषण गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यसलाई आलोचनात्मक तथा रचनात्मक रूपमा बुझ्नु जरुरी छ । मूलतः एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको सैद्धान्तिक आधार के–के हुन् ? प्राविधिक तथा व्यावहारिक आयाम के–के हुन् ? यो कसको हित र स्वार्थमा केन्द्रित छ । अन्तिम रणनीतिक लक्ष्य के हो ? एकताको दूरगामी ऐतिहासिक राजनीतिक महŒव यसैमा निर्भर देखिन्छ । मूलतः एकताको मूलभूत आधार भनेको वैज्ञानिक समाजवाद नै हो । उन्नत चेतनासहितको वैज्ञानिक समाजवादबाहेक अरू सबै भ्रम हुन् । माक्र्सवादी प्रस्थापनामा आधारित वैज्ञानिक समाजवाद र बुर्जुवाहरूको उपभोक्तावादी समाजवादमा सारभूत रूपमै भिन्नता रहेको छ ।
तेरोमेरोको मनोरोगबाट सबै नागरिक सङ्क्रमित हुन्छन् । व्यक्तिगत धन आर्जनको डरलाग्दो होडमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुन पुग्छ । कथित क्षमताको नाममा योग्यतम मात्र हाबी हुन्छन् । यसले विकृत, भ्रष्ट, अराजक र विभेदपूर्ण संस्कृतिलाई मलजल गर्छ । जनतामा उन्नत समाजवादी चेतना विकास नगरी राज्यले दायित्व लिने पद्धति समाजवाद होइन । यसलाई योग्यतमको उपभोक्तावादी समाजवाद भनिन्छ ।
यता माक्र्सवादी वर्गीय प्रस्थापनामा साम्यवादमा पुग्ने साधन नै वैज्ञानिक समाजवाद हो । माक्र्सवादले लामो र निरन्तर सङ्घर्षको प्रक्रियामार्फत उन्नत सामूहिक चेतनाको विकासपछि मात्र समाजवाद सम्भव देख्छ । स्वार्थी दया÷मायामा राज्यले स्रोत साधन वितरण गर्नु नै वैज्ञानिक समाजवाद होइन । यो उन्नत चेत, सामूहिक स्वार्थ, न्यायिक वितरणमा आधारित समानता र सामाजिक न्याय ग्यारेण्टी गरिएको सामूहिक स्वार्थसहितको राज्यरूप हो । यसमा अन्तरविरोध र विभेदपूर्ण उन्मूलनको प्रक्रियामा हुन्छ ।
यही मान्यतामा एमाले र माओवादीबीचको एकताको मूल आधार वैज्ञानिक समाजवाद नै हुनुपर्छ । उचित तथा अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्थापनविना यो सम्भव छैन । यस्तो रणनीतिक लक्ष्य चुम्न तत्काल स्थिर सरकार अनिवार्य हुन्छ । स्थिर सरकारले योजनाबद्ध रूपमा अल्पकालीक, मध्यकालीक र दीर्घकालीक विकास–निमार्णका परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । विपे्रषणमा आधारित वित्तीय अर्थतन्त्रलाई उत्पादन मुलुक राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि उद्योग, कलकारखानाको तीव्र विकास गर्नुपर्छ । दलाल पुँजीलाई निरुत्साहित गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निमार्णमा जोड दिनुपर्छ । राष्ट्रिय र प्रगतिशील औद्योगिक चरित्रको अर्थतन्त्र अनिवार्य हुन्छ । राष्ट्रिय प्रगतिशील औद्योगिक अर्थतन्त्रको पूर्ण विकासविना साँचो समृद्धि र असली शान्ति सम्भव हुँदैन किनभने प्रगतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले मात्रै समुचित उत्पादन र न्यायपूर्ण वितरणमा प्रक्रियागत रूपमा ध्यान दिन्छ । स्रोत साधनको राष्ट्रियकरण सहज हुन्छ । मूलतः सामूहिक राष्ट्रिय अर्थतन्त्र समाजवाद निर्माणको पहिलो आधार हो । समृद्धि र शान्तिसहितको राष्ट्रिय वा प्रगतिशील पुँजीको पूर्ण आकारमा विकास नगरी समाजवादमा सङ्क्रमण सम्भव हुँदैन । यही नै वैज्ञानिक समाजवादको माक्र्सवादी अवधारणा हो ।
वास्तवमा अमुक समृद्धि र पुँजीको विकासले मुलुक जति नै धनी भए पनि वैज्ञानिक समाजवाद सम्भव हुँदैन । समृद्धि र समाजवाद फरक सवाल हो । बुर्जुवा समृद्धिले वर्ग अन्तरविरोधपूर्ण उपभोक्तावादी समाजको जन्म गराउँछ । त्यसैले उत्पादनमूलक, प्रगतिशील र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र न्यायोचित वितरणसहितको समृद्धि नै एकताको आधार हो । चुनावमा बहुमत स्थिर सरकारका लागि हो । स्थिर सरकार विकास र राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हो । विकास र राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्र समृद्धिको आधार हो । समृद्धि न्याय र समानताका लागि हो । न्याय र समानता स्थायी शान्तिका लागि हो । समृद्धि र शान्तिसहितको राष्ट्रिय पुँजीको व्यापक उत्पादन र न्यायोचित वितरण वैज्ञानिक समाजवादको आधार स्तम्भ हो ।
त्यसैले सैद्धान्तिक राजनीतिक पक्ष नै एकताको मूल आधार हो । गणितीय जोड–घटाउ, सरकार गठन–विघटन र दलीय आयतन घटबढ नितान्त प्राविधिक आधार हो । बहुमत अल्पमत अनि नेता कार्यकर्ताको भौतिक परिवेश निर्माण र लाभको पद प्राप्ति सहायक पक्ष हो । एकताले वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्मको यात्रा तय गर्नैपर्छ, नत्र यसको राजनीतिक औचित्य हुने छैन । त्यसैले तालमेलको कार्यनीति र एकताको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवादबाहेक अरू हुन सक्दैन । यसका लागि साँघुरो घेरा, निम्न पुँजीवादी कित्ताकाट, प्रतिशोधपूर्ण मनोवैज्ञानिक लक्ष्मणरेखा अनि गुटगत चिन्तनको विरासत त्याग्ने साहस गर्नैपर्छ । यसो भए सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट यसैको छातामुनी गोलबन्द हुने सम्भावना छ । अन्यथा अन्य वैकल्पिक धारले नेतृत्व गर्नेछ । यसले अर्को आन्दोलनलाई अवश्यंभावी र निर्विकल्प बनाउने छ । त्यतिखेर टालटुले प्राविधिक एकता गलत साबित हुनेछ । सिद्धान्त, एजेन्डा, नीति र विधिमा एकता नगरिएकोमा पश्चत्ताप गर्नुपर्ने छ, जुनबेला समयले कोल्टे फेरिसकेको हुनेछ । त्यसैले एकता वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको महान् रणनीतिक उद्देश्यमा केन्द्रित हुनु अनिवार्य देखिन्छ ।